I-Lansium parasiticum - Wikipedia
I-Lansium parasiticum, eyaziwa kakhulu ngesiNgisi ngokuthi i-langsat (/ ˈlɑːŋsɑːt /) noma i-lanzones, iyisihlahla somuthi emndenini wakwaMahogany ngezithelo ezidliwayo ezidayiswayo. Uhlobo luhlobo lwendabuko eSoutheast Asia.
Lesi sihlahla silinganiswa ngokulingana, sifinyelela kumamitha angama-30 (98 ft) ukuphakama namasentimitha angama-75 (30 in) ubukhulu. Izihlahla zembewu ezineminyaka engama-30 ubudala ezitshalwe ku-8 x 8 metres spiding zingaba nokuphakama kwamamitha ayi-10 ububanzi nobubanzi obungama-25 cm. Isiqu sikhula ngendlela engahambisani, nezimpande zazo ze-buttress zikhombisa ngenhla komhlaba. Amagxolo esihlahla siwumbala obomvana, onamabala akhanyayo namnyama. I-resin yayo iminyene futhi inombala obisini.
Amaqabunga acwebezelwe kahle ayabalwa, anezinwele ezacile, nama-6 kuya ku-9 e-buds ngezikhathi ezithile. Ama-buds ayinde futhi ayi-elliptical, cishe amasentimitha ayi-9 kuya kwayi-21 (3.5 kuya ku-8.3 in) ngamasentimitha ayi-5 kuye kwayi-10 (2.0 kuye ku-3.9 in) ngosayizi. Unqenqema olungaphezulu luyakhanya, futhi amaqabunga ngokwawo anezisekelo nezikhombisi ezibekiwe. Iziqu zama-buds zikala amamitha ayi-5 kuye kwayi-12 (0.20 kuya ku-0.47 ku).
Izimbali zitholakala kuma-inflorescence akhula futhi alengiswa kusuka kumagatsha amakhulu noma isiqu; amalulwane angafika aze afike ku-5 endaweni eyodwa. Zivame ukuhlwanyelwa ezisekelweni zazo, zilinganise amasentimitha ayi-10 kuye kwangama-30 (3.9 kuye ku-11.8 in) ngosayizi, futhi zibe noboya obufushane.  Izimbali zincanyana, ezineziqu ezimfishane, futhi zinezitha ezimbili. I-sheathe ibunjiwe njengendebe ebanzi emihlanu futhi inombala ophuzi ophuzi. I-corona imile okweqanda futhi inzima, ingamamitha ayi-2 kuye kwayi-3 (0,079 kuya ku-0.118 in) ngamamilitha ayi-4 kuye kwayi-5 (0.16 kuye ku-0.20 in). Kukhona stamen eyodwa, elinganisa amamitha ayi-2 (0,079 in) ubude. Ingaphezulu lamandla liyindilinga. I-pistil imfushane futhi iminyene.
Izithelo zingaba ngama-elliptical, ovoid noma eziyindilinga, zikala amasentimitha ama-2 kuye kwayi-7 (0.79 kuye ku-2.76 in) ngamasentimitha ayi-1.5 kuye kwayi-5 (0.59 kuye ku-1.97 in) ngosayizi. Izithelo zibukeka kakhulu njengamazambane amancane futhi zithwalwa ngamaqoqo afanayo namagilebhisi. Izithelo ezinkulu zikwezinhlobonhlobo ezaziwa ngokuthi ama -ncane. Imbozwe izinwele ezacile, eziphuzi zinikeza isici esincanyana. Ubukhulu besikhumba buyahlukahluka ngezinhlobonhlobo, ukusuka kumamilimitha amabili (0.079 in) kuya kumamilimitha ayi-6 (0.24 in). Izithelo ziqukethe imbewu engu-1 kuye kwayi-3, enambitheka kancane, nokunambitha okumunyu; imbewu imbozwe yi-aril eminyene, emhlophe qhwa enambitheka okumnandi futhi omuncu. Ukunambitheka kuye kwafaniswa nenhlanganisela yamagilebhisi namagilebhisi futhi kubhekwa njengento enhle kakhulu ngabaningi. Inyama enoshukela enoshukela iqukethe i-sucrose, i-fructose neshukela.  Uma isetshenziswa, kukhethwa izinhlobo ezinembewu encane noma engafakwanga kanye ne-aril eyindilinga.
"https://zu.wikipedia.org/w/index.php?title=I-Lansium_parasiticum&oldid=54174" تان ورتل
Leli khasi laqeda ukuhlelwa ngo-11 uMfumfu 2019, nge-17:27.